Tag: gurmad | Martech Zone
Sida loo Qorsheeyo Websaydhkaaga Cusub
Arbacada, Maarso 5, 2014 Arbacada, Maarso 5, 2014 Douglas Karr
Dhamaanteen waan joognay… bartaadu waxay u baahan tahay nasasho. Ama meheraddaada ayaa dib loo magacabay, barta ayaa noqotay mid duugowday oo duugowday, ama si fudud uma beddelayso martida sida aad adigu ugu baahan tahay adiguba. Macaamiishayadu waxay noo yimaadaan si ay u kordhiyaan beddelaadyada waxaanna inta badan ku khasbanaaneynaa inaan dib u qaadno oo aan dib-u-horumarinno dhammaan websaydhyada ay ka soo iibsadaan illaa iyo nuxurka. Sideen u qabanaa? Degel wuxuu u kala jabay 6 fure
CodeGuard: Kaydinta Websaydhka ee Daruuraha
Khamiista, Diseembar 6, 2012 Arbacada, December 5, 2012 Douglas Karr
Qiyaastii sanad ka hor, waxaan haysannay macmiil na soo waca oo iyagu way waalanaayeen. Waxay ka tirtireen isticmaale nidaamkooda oo isticmaalehaas ayaa iska lahaa dhammaan waxyaabaha ku jira sidaa darteed sidoo kale waxyaabaha la tirtiray Mawduucii wuu dhammaaday. Bilo shaqo si loo buuxiyo goobta… dhammaantood waxay ku baxeen wadne garaac. Ka qayb qaadashadeenu waxay ahayd oo kaliya inaan dhisno mawduucooda, ma maamuli lahayn martigelinta iyo hirgelinta dhabta ah. Natiijo ahaan, waxaan haysanay oo keliya
Wax yar ka hor sanad ka hor (2005) Waxaan sameynayay xoogaa latashi dhanka ah waxaana ubaahanahay inaan helo qalab cusub oo guriga agtiisa ah si aan wax uga qabto. Waxaan soo iibsaday kombuyuutar cusub, router wireless netgear cusub ah iyo kaararka wireless-ka… maalgashiga ugu fiicana wuxuu ahaa LinkStation. LinkStation wuxuu si toos ah ugu xiraa routerkeyga wireless-ka wuxuuna leeyahay 250Gb oo boos ah. Isku xirnaanta adeegsadaha ee 'LinkStation' runti waa mid fudud… Waan awooday